အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်မှုအတွက်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် hedonic တန်ဖိုး (2018) - သင့်ရဲ့ ဦး နှောက်တွင် Porn
gil, G Rosenthal
Published: 04 ဇူလိုင်လ 2018
မိတ်လိုက်ဦးစားပေးအာရုံခံသွင်းအားစုထိန်းသိမ်းထားကြသည်လျှင်ပင်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအတွင်းနှင့်အကြားအစွန်းရောက်အပြောင်းအလဲကိုပြသနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအပြောင်းအလဲလှုံ့ဆော်မှုမှအပြုသဘော assign ကြောင်းအကဲဖြတ်ယန္တရားများနှင့်အတူဆက်နွယ်သောအပြောင်းအလဲကြားနေ, ဒါမှမဟုတ်အနုတ်လက္ခဏာ hedonic တန်ဖိုးကို၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည် - သည်, ဆွဲဆောင်မှုစိတ်မဝင်စား, ဒါမှမဟုတ်ဆွဲဆောင်မှုမရှိသကဲ့သို့, ထိုသူတို့ကိုတံဆိပ်ကပ်။ လှုံ့ဆော်မှုများ၏ hedonic တန်ဖိုးမှတ်သားအပြောင်းအလဲများမှဦးဆောင်ဗီဇအတွက်ကွဲပြားမှုများအတွက်ကျယ်ပြန့်အမူအကျင့်သက်သေအထောက်အထားများ, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကို, ဒါမှမဟုတ်လူမှုရေးအတွေ့အကြုံရှိပါတယ်။ အကဲဖြတ်မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုများသို့မဟုတ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သွင်းအားစုကတဆင့်အလွယ်တကူ ပြင်ဆင်. ဖြစ်ကြောင်းယန္တရားများတွေရဲ့ array မှတဆင့်ကုန်ပြီ, ထိုမကြာခဏအပြုအမူဦးစားပေး၏လျင်မြန်စွာဝယ်ယူသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေမည်။ hedonic တန်ဖိုး "လှန်ပေးသည်" မှပေါ်ထွက်လာသော preference ကိုအတွက်ပြောင်းပြန်အတော်လေးဘုံဖြစ်နိုင်သည်။ preference ကိုဆငျ့ကဲမော်ဒယ်များသို့ထိုကဲ့သို့သောအဆက်အသွယ်မရတဲ့အပြောင်းအလဲများကိုထည့်သွင်းရိုအမျိုးမျိုး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပဋိပက္ခနှင့် sympatric speciation နဲ့တူဖြစ်စဉ်များကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုအလင်းလိမ့်မည်။
ကျောရိုးရှိသတ္တဝါနှင့်သိသိသာသာအတှေ့အကွုံအားဖြင့်ပြုပြင်ထားသောနိုင်ကျောရိုးမဲ့ taxa ပြပွဲဦးစားပေးဖြတ်ပြီး Choosers ။ ဤရွေ့ကားအတွေ့အကြုံများအစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်တစ်သက်တာသက်ရောက်မှုအနေဖြင့်ပိုးပန်း interaction က၏သင်တန်းကာလအတွင်းရေတိုရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအထိ။ အချို့ကိစ္စများတွင်အတွေ့အကြုံ၏သက်ရောက်မှုများကိုတိုက်ရိုက်အာရုံခံပြုပြင်မွမ်းမံချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး olfactory ထိတွေ့မှု (Nevitt et al ။ 1994) မှတုံ့ပြန်မှုအတွက်အနံ့ receptors ၏သာဓကများအတွက် differential ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း။ အများကြီးပိုပြီးခုနှစ်တွင်တစ်ဦးအကျွမ်းတဝင်နှိုးဆွဖို့အရံ sensitivity ကိုထိုသို့သောတစ်ခုတိုးထွက်အုပ်ချုပ်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာကျနော်တို့အနေနဲ့အတွေ့အကြုံကို-မှီခို preference ကိုတစ်ဦးရှေးရိုးစွဲအာရုံခံတုန့်ပြန်၏နောက်ခံဆန့်ကျင် hedonic တန်ဖိုးအပြောင်းအလဲပါဝငျကွောငျးစိတျခနြိုဘယ်မှာဖြစ်ကောင်း ပို. ပင်ဖြစ်ပွားမှုရှိပါတယ်။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီဆန့်ကျင်ဘက်-လိင်မိဘတှငျတှေ့လှုံ့ဆော်မှုနှင့် samesex မိဘတှငျတှေ့သူတို့အဘို့ antipathies များအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရှိရာမြင်းကျား Finch အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Imprint များအတွက်အမှုဖြစ်ပါသည် (တစ်ဆယ်သူ Cate et al ။ 2006) ။ မျိုးစိတ်အမျိုးမျိုးမှာတော့စိုးရိမ်ရေမှတ်မှထိတွေ့မှု, အသားစားတွေကိုကဲ့သို့ သာ. ကြီးမြတ်အာရုံခံဆွပေးအဆင်တန်ဆာအဘို့မိမိတို့စိတ်ကြိုက်များကိုဆုံးရှုံးသို့မဟုတ် reverse မှ choosers ဖြစ်ပေါ်စေသည် (Berglund 1993; Pilakouta နှင့် Alonzo 2014) ။ အလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုသူအခြားအမျိုးသမီးထံမှ proceptive တွေကိုအတူတွဲသောအခါအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုယခင်ကဆွဲဆောင်မှုမရှိအထီးကြိုက်တတ်တဲ့ရှိရာအိမ်ထောင်ဖက်ကူးယူအတွက်ဖြစ်ပေါ် (။ Mery et al 2009; ။ ဆန်းတို့စ et al 2014; Vakirtzis 2011) ။ Chooser ကိုမကြာခဏအာရုံခံအပြောင်းအလဲများကနေပျေါပေါကျဖို့မဖြစ်နိုင်နည်းလမ်းအသက်အရွယ်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဦးစားပေးပြုပြင်မွမ်းမံ။ ဥပမာအားဖြင့်, အမျိုးသမီးဖဲ bowerbirds သည့်အခါငယ်ရွယ် High-ပြင်းထန်မှုပိုးပန်းပြသမှုအားဖြင့်လန့ပေမယ့်တဲ့အခါမှာအဟောင်းတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ပိုးပနျးအထီးပိုနှစ်သက်ကြသည်: ပိုမိုထင်ရှားလှုံ့ဆော်မှုယူဆရလှုံ့ဆော်မှု (Coleman et ခြိမ်းခြောက်ထံမှပိုးပန်းခွဲခြားတတ်ဖို့သင်ယူအမျိုးသမီး၏အကျိုးဆက်အဖြစ်ဆွဲဆောင်မှုမှဆန္ဒရှိထံမှလှန်ပေးသည် အယ်လ်။ 2004) ။
Associative Learning သည်လှုံ့ဆော်မှုများကို hedonic တန်ဖိုးသတ်မှတ်ရန်နောက်ဆုံးနှင့်နေရာအနှံ့လမ်းကြောင်းကိုပေးသည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင်အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်မှုအခြေအနေတွင်ကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံများနှင့်ဆက်နွယ်နေသောမတရားလှုံ့ဆော်မှုများသည်ဆွဲဆောင်မှုရှိလာပြီးမကောင်းသောအတွေ့အကြုံများနှင့်ဆက်စပ်သူများသည်ဆွဲဆောင်မှုမရှိတော့ပေ။ ဥပမာ Coria-Avila နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (၂၀၀၅) မှတွေ့ရှိချက်အရအမျိုးသမီးများသည် "paced copulation" အခြေအနေတွင်ကြွက်များအားမသန်စွမ်းသောအနံ့ကိုပိုနှစ်သက်ကြောင်း၊ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်မိတ်လိုက်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်သော်လည်းအမျိုးသမီးများနေထိုင်သောနေရာနှင့်မသက်ဆိုင်သောအခြေအနေတွင်မဟုတ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် မိတ်လိုက်ကြိုးစားမှုချွတ် fend ခဲ့ရသည်။ လိင်ဆုလာဘ်ဟုခေါ်ဆိုခြင်း - ပိုးပန်းခြင်းနှင့်မိတ်လိုက်ခြင်းများနှင့်ဆက်စပ်သောအပြုသဘောဆောင်သော hedonic တန်ဖိုးရှိလှုံ့ဆော်မှုများ - အခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင်အားဖြည့်ပေးသည်။ အမှန်စင်စစ်တိရိစ္ဆာန်များကို fetishes များမွေးထုတ်ရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားနိုင်သည်။ Pfaus နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (၂၀၁၂) သည်ကြွက်ကြွက်အားကြွက်ဂျာကင်အင်္ကျီတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ရန်သတ္တုကြောင်များကိုလေ့ကျင့်ခဲ့သည်။ လေ့ကျင့်ပြီးနောက်သင်တန်းတက်ပြီးနောက်ယောက်ျားများသည်ဂျာကင်အင်္ကျီတပ်ထားခြင်းဖြင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွခြင်းခံရသည်။ inketinkaya နှင့် Domjan (2005) သည် terrycloth object တစ်ခုကို Mount လုပ်ရန်အထီးငုံးများကိုလေ့ကျင့်ရန်အလားတူနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်မည်သည့်လှုံ့ဆော်မှုကိုမဆိုလိင်ဆိုင်ရာဆုလာဘ်များနှင့်ဆက်နွယ်ရန်အလားအလာရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် Associative Learning သည်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုပြင်းထန်သောအပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘောဆောင်သော hedonic တန်ဖိုးသတ်မှတ်နိုင်သည်။